Shiinaha 3ply mask la tuuri karo wajiga nooca I, Nooca II, Nooca IIR soosaarayaasha iyo alaableyda | ORIENT
3 wejiga maaskaro ee la tuuro oo ah nooca I, Nooca II, Nooca IIR
Maaskarada qalliinka la tuuri karo waxay ka kooban tahay 3 lakab oo lakab dibedda ah oo aan tolmo lahayn, 98% lakab dhalaalaya iyo lakab gudaha ah oo aan tolmo wanaagsan lahayn oo leh dusha sare ee hypoallergenic jilicsan ee ka hortagga cuncunka maqaarka ama dhibaatooyinka xasaasiyadda.
95% ama ilaa 99%
loop dhegaha ama ku xir
caddaan, buluug, cagaar, casaan iyo wixii la mid ah
50pcs / sanduuq, 40boxes / ctn
30 maalmood gudahood kadib amarka xaqiiji
dhar aan laba laaban
Diyaarad Dibedda ah: 20GSM ama 25GSM / m2 (caddaan / buluug / cagaar / casaan / casaan / jaalle ama midab kale) Polypropylene Wareegtay
Qalabka miiraha dhexe: 20GSM / 25GSM / m2 (miiraa cad dhalaalay filter);
duulimaad gudaha ah: 18GSM ama 20GSM / m2
1. Maaskarada qalliinka la tuuri karo waxay ka kooban tahay 3 lakab oo lakab dibedda ah oo aan tolmo lahayn, 98% lakab dhalaalaya iyo lakab gudaha ah oo aan tolmo lahayn kaas oo leh lakab dusha sare ee hypoallergenic oo ka hortaga cuncunka maqaarka ama dhibaatooyinka xasaasiyadda. Wax soo saarku wuxuu u hoggaansamayaa nooca EN14683 nooca II, nooca IIR standard.
2.No cuncun lahayn oo si fudud loo neefsan karo, ayaa keenta waxtarka neefsashada oo leh cadaadis kala duwan. Waxtarka sifaynta bakteeriyada sare.
Loop Dhego Jilicsan & Raaxo Leh
3. Qalabka dhegta-loop waxaa laga sameeyaa wareega wareega ee bilaashka ah 'Lycra elastic' kaas oo ku dheereeya cabirka 1: 2 taasoo sahleysa in la xidho oo raaxo lagu saaro.
4.Siligga sanka ee jilicsan ayaa si xor ah u laaban kara foorarka, wuxuu ku habboon yahay buundada sanka iyo wejiga.
1. Maaskarada caafimaad ee la tuuri karo waxay ka kooban tahay jirka maaskaro, faashad maaskaro iyo goos gooska sanka. Jirka maaskaro wuxuu ka samaysan yahay dhar aan tolmo lahayn iyo meltblown dhar aan tolmo lahayn, sanka ayaa laga sameeyaa waxyaabo balaastig ah oo qaloocsan, nooca suunka maaskaro A wuxuu ka kooban yahay dhar laastik ah, nooca Bna wuxuu ka sameysan yahay dhar aan tolnayn;
2. Waxtarka sifeynta bakteeriyada ayaan ka yarayn 95%. Caabbinta hawo-qaadashadu kama badna 49Pa / cm2. Wadarta tirada gumeysiga bakteeriyada ayaa ah≤100CFU / gE coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, iyo fungi shkuligood lama oga.
Shahaadada: CE ISO FDA, Caddaan ku qoran Shiinaha.
Hore: Qamiis difaac oo la iska tuuri karo oo Xirfad Leh
Xiga: ORT103A Stethoscope
Nooca Kondiyaha Neefsashada Qaybta La tuuro